ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ကေအိုင်အေဌာနချုပ် လိုင်ဇာအနီးကို အစိုးရတပ်တွေက လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ပိုမိုပစ်ခတ်လာနေတာကြောင့် ဒေသခံရွာသားတွေ ထိမှန်ပြီး ဒဏ်ရာရ သေဆုံးတာတွေ ရှိနေ (ရုပ်သံ)
ကေအိုင်အေဌာနချုပ် လိုင်ဇာအနီးကို အစိုးရတပ်တွေက လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ပိုမိုပစ်ခတ်လာနေတာကြောင့် ဒေသခံရွာသားတွေ ထိမှန်ပြီး ဒဏ်ရာရ သေဆုံးတာတွေ ရှိနေ (ရုပ်သံ)
အင်း ကောင်းပါတယ် မြန်မာ့တပ်မတော် ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းလုပ်ချင်နေတဲ့လူတစ်စုကို အမြစ်ကနေရှင်းပစ်ပါ အားပေးနေတယ်။
Nga Sanay said...
လူသားတွေ စစ်ဘေးကနေ အိုးအိမ်တွေကိုစွန်.ပြီး၊ ဋ္ဌေကာက်လန်.တဋ္ဌကား ပြေးလွှားနေဋ္ဌကရတယ်။
ဗမာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကချင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူတွေဟာ စစ်ရဲ. မြေဇာပင်တွေပါ။
နှစ်ဘက်လုံးက ကျသွားတဲ့ ရဲဘော်တွေရဲ. မိသားစုတွေကို ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။
မာနတွေလျှော့ပြီး အစွန်းမရောက်ဘဲ အတူတကွ ငြိမ်းချမ်းစွာ ယဉ်တွဲနေထိုင်နုိုင်ရေးကို ရှေးရှူဋ္ဌကပါ။
အမြန်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းရေး ရဋ္ဌကပါစေ။
ka naung said...
may be there village also real villager is little,KIA army villager is much,
ဟေ့ကောင် ကနောင်(ka naung)မင်းတို့စစ်အစိုးရ
ခဲ့တာပဲမဟုတ်လား....။အေး မင်းတို့ဒီလိုပုံစံနဲ့ ဗမာ
လိုပဲအပစ်ရပ်ရပ် မင်းတို့စစ်အာဏာရှင်တွေ ဒီလိုမဟာ
majoi shingra said...
နေမင်း ဘာလဲ ငနာ အမြစ်ကရှင်းခံရမှာက မင်းတို့ ကွ သူများ နယ်မြေကို လာပြီးလဲ ရန် လို သေး သူတို့ ကဘဲ ပြန်အော်သေး ကိုယ့်နယ်မြေမှာ ကိုယ်အေးအေး လူ လူ ပြည်သူ့ ငွေ သုံးဖြုန်းပြီး နေကြတာ အားမရဘူး နယ်ချဲ့ ချင် ရန်လိုချင်တဲ့ စိတ်က ခုထိမကုန်ဘူး ဒါကြောင့် ထိုင်းလူမျိုးတွေလည်း လုံးဝ မကျေတာ
Burma Government is terrible and Aunty Su is silent on Civil war in Northern Burma
အငြင်းပွားနေမယ့်အစား ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဖို့လှုပ်ရှားမှုတွေ စရ ကြအောင်
ဒီလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်နေတဲ့ အချိန်ဟာ ငြိမ်းချမ်းနေရမဲ့ အချိန်ပါ။ ပြည်သူလူထုရဲ့ အမြင်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေကို ဖျက်လိုဖျက်စီးလုပ်တတ်တဲ့ သူတွေအဖြစ် ပုံဖော်ပြီး တဖက်သက်ထိုးစစ်စင်နေတာတွေရပ်သင့်ပါပြီ။
တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် နိုင်ငံရေးအဖြေရှာတဲ့နည်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးမဆွေးနွေးချင်ဘူးဆိုကတဲ့က ဒီရေဒီမြေပေါ်မှာ ဟိုးဘိုးဘွားတွေလက်ထပ်ကတဲ့က နေထိုင်အသက်ရှင်လာကျတဲ့ တိုင်းရင်းသား ညီအကိုတွေအပေါ် လေးစားသမှု လုံးဝမရှိဘူးဆိုတာပြလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။ ငါ့မှာသေနတ်ရှိတယ် ငါပြောတိုင်းလုပ်မလုပ်ရင် သတ်မယ်ဆိုတဲ့ မတရားအနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ ကြီးနိုင်ငယ်ညင်းဝါဒနဲ့ဖြေရှင်းလာခဲ့လို့လဲ အခုချိန်ထိငြိမ်းချမ်းရေးမရသေးတာပေါ့။ ငြိမ်းချမ်းနေလို့ကလဲ မဖြစ်ဘူးလေး တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းသွားရင် စစ်တပ်ဆိုတာ မလိုတော့ဘူး စစ်တပ်မလိုတော့ရင် နိုင်ငံရေး ဇာတ်ခုံပေါ်မှာ စစ်သားဆိုတာလဲ သူ့အလိုလို ပျောက်ကွယ်သွားမှာလေ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးတယ် ဘာညာနဲ့တာ ပါစပ်က လျှောက်အော်နေတာ တကယ်တမ်းမငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်နေတာလဲ သူတို့ပဲ။ အခုလဲ ကချင်က ခွဲထွက်ဖို့ လုပ်တယ် ဘာညာနဲ့ အကြောင်းတွေပြ ကျနော့အမြင်တော့ ကချင်က ခွဲထွက်ဖို့ တောင်းဆိုနေတာ တခုမှမပါဘူးဗျ...တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်လို့ နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ ဆွေးနွေးအဖြေရှာလိုက်ရင် ငြိမ်းချမ်းနေတာကြာပြီ။ မတရား ဗိုလ်ကျချင်တဲ့ မူဝါဒနဲ့ ဆက်ဆံနေမှတော့ ဘယ်သူက ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ လက်ခံပေးရမှာလဲ လက်နက်ဆွဲကိုင် တိုက်ခိုက်ဖို့ကလွဲရင် တိုင်းရင်းသားတွေ အဖို့တခြားရွေးစရာမရှိဘူး ဒါပဲ။ အခုကချင်နဲ့ တိုက်နေလို့ ရှမ်း၊ကရင် စတဲ့ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား အုပ်စုတွေနဲ့ အဆင်ပြေနေတယ်မထင်နဲ့ ...ကချင်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရသွားတယ်ထားအုံး အဲလိုအချိန်ရောက်ရင်တော့ ရှမ်း ဒါမှမဟုတ် ကရင် အုပ်စုတခုခုကို ပြသနာရှာပြီး မငြိမ်းချမ်းအောင် ဆက်လုပ်နေအုံးမှာ အသေအချာပဲ။ နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းလို့ မဖြစ်ဘူးလေ ငြိမ်းချမ်းနေရင် သူတို့အတွက် အကြောင်းပြစရာမရှိ ပြည်သူတွေအကြားမှာ သူရဲကောင်းလုပ်လို့မရတော့ရင် အလိုလိုနေရင်း စစ်တပ်ဆိုတာ လမ်းဘေးရောက်မှာကိုး။ မြန်မာနိုင်ငံကြီး အမြန်ငြိမ်းချမ်းပါစေဗျာ။
အားလုံးသော အာဏာရူး များ မြန်မြန်သေပါစေ
စစ်မှန်သော ခေါင်းဆောင်ကောင်း မြန်မြန်ပေါ်ထွန်းပါစေ
ကျမ ကတော့ ခပ်အေးအေးပါပဲ။ ရန်ကုန်မှာ စတိတ်ရှိူးရှိလို့ ညနေအလှပြင်ပြီးထွက်မယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်လာခဲ့။ ပဲ ကောင်းကောင်း ပေးမယ်။
ကချင်မှာ လေယာဉ်တွေနဲ့ ဗုံးချတာ ဟုတ်လို့လား။
ကျမ "သား" က အင်္ဂလန်မှာ အဝေးကြီး။
အေးဆေး ခွေးလေးနဲ့ ဆော့နေမယ်။
မောင်လေးစိန် (သမ္မတဂျီးသိန်းစိန်) နဲ့ ကျမ (အောက်တန်းစုကြည်) လျှို့ဝှက် သဘောတူထားတာရှိတယ်။ တိုးတိုးလေးပြောပြမယ်။ အနားတိုး ....
တိုင်းရင်းသားတွေကို တိုက်ရင် ညိမ်ညိမ်လေး နေပေးနော် မမ တဲ့။
မောင်လေးကို ယုံတာနဲ့ ပုံအပ် ပစ်လိုက်တယ်။
dark cloud က အတိုက်ခံထားရတဲ့ ကချင် ဝပ်ဆိုက်ကထင်တယ်နော် အရေအအသားကောင်းလို့ဟိဟိ starting fooling လုပ်တဲ့ထဲ သားလည်းပါတယ်ဂျ
အမှန်က နှစ်ဘက်စလုံး မှ စစ်ရေးခေါင်းဆောင် သူများ
ဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲများကို ဦးဆောင် ဆွေးနွေး နေခြင်းဖြင့်
Result ကောင်းကောင်း ထွက်လာမည် မဟုတ်
KNU ကို အတုယူသင့်သည် ။
KNU ကိုလေ့လာရမယ်ဆိုရအောင် ။ KIA ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကို ဘယ်လောက်ထိ အာရုံစူးဆိုက်ခဲ့တယ် ဘယ်လောက်ထိ ဦးစားပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကို ကိုစိုးညွန့် လေ့လာပြီးပြီလာ။ ဆွေးနွေးပွဲတွေကို အဖွဲ့စည်းအမျိုးမျိုးဖွဲ့ပြီး အစိုးရရဲ့ တဖက်သတ်တောင်းဆိုးသမျှတွေကို အတတ်
နိုင်ဆုံး လိုက်လျှော်ခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့လို့ စစ်ပွဲတွေ အကြီးအကျယ်ဖြစ်တဲ့နေ့အထိ သေချာတဲ့ ကတိစကားဆိုတာ KIA ဘက်က ဘယ်တုံးကမှ မကြားဖူးခဲ့ဘူး။ အပြစ်ရပ်စဲတဲ့ နေ့ကနေစလို့ ဒီနေ့အထိ စစ်အစိုးရအပေါ် KIA ဘယ်လိုဆက်ဆံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလဲလေ့လာကြည့်ပါခင်ဗျ။ သူတို့တောင်းဆိုတဲ့ အချက်တွေ မရလို့ကတော့ တရွာဝင်တရွာထွက် လုပ်ချင်သလိုလုပ်ပြီး ငါတို့ကို အာခံရင် ဒီလိုပဲအားလုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ messages တွေကိုသာ ပေးပေးသွားတာ ဒီနေ့အထိပဲ။့  တော်တောင်ထဲက ပြည်သူတွေ ဘယ်လိုခံစားလာကျရတယ်ဆိုတာကို ပြည်မကလူတွေ မသိပေမဲ့ ဒီနေ့အထိ သူတို့ ဘ၀တွေ မတရားခံနေရတုန်းပဲ။ ဘယ်တုန်းကမှ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆွေးနွေးဆက်ဆံလို့မရခဲ့ဘူး။
ဆွေးနွေးပွဲ အချက်အလက်များကို အများပြည်သူ
သိရှိရန် အများပြည်သူ သိရှိနိုင်သော နေရာ တစ်ခု
ကို နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်သူများ ဦးဆောင်၍ စစ်ရေး
ခေါင်းဆောင် သူများ အပါအ၀င် မည်သည့် အကြောင်း
ပြချက် နှင့်မျှ ပျက်ကွက်ခြင်း မရှိစေဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေး
ဆွေးနွေးပွဲ များကို အမြန်ဆုံး ပြန်စသင့်သည်
ဟု ယူဆပါသည် ။ ဆွေးနွေးသည့် အချက်အလက်
အသေးစိတ် ကိုလည်း အောင်မြင်သည် မအောင်မြင်
သည် အပထား အများပြည်သူ သိရှိရန် ထုတ်ပြန်သင့်
သည် ဟုယူဆသည် ။